Warbixin: Fadhigii Maxkamada Sare ee Dhagaysiga Dacwada Ucid, Dooda Qareenada Labada Dhinac iyo Nuxurka Doodu Ku Dhamaatay. | Berberatoday.com
Warbixin: Fadhigii Maxkamada Sare ee Dhagaysiga Dacwada Ucid, Dooda Qareenada Labada Dhinac iyo Nuxurka Doodu Ku Dhamaatay.
Hargeysa(Berberatoday.com)-Maxkamada Sare ee Somaliland ayaa Shalay oo Axada, bishu ahayd 18/09/16, ka bilawday dhagaysiga dacwada udhaxaysay labada garab ee xisbiga mucaaradka ah ee Ucid. Waxaana dhagaysiga dacwadan ka soo qayb galay labada garab ee ay dacwadu u dhaxayso oo ay kala hogaaminayaan Musharaxa Madaxwaynaha Jamaal Cali Xuseen iyo Gudoomiye Faysal Cali waraabe iyaga oo ay weheliyaan dhan walba qareenada u doodayay. Dacwadan oo ahayd Racfaan uu soo Gudbiyey Faysal Cali Waraabe Oo Ka Biyo Diiday Go,aano Ay hore uga Soo Saaren Gudida Diiwan Galinta Ururada Siyaasada Somaliland. Sidoo kale waxa goob ka ahaa dhagaysiga dacwadan 11 ka Garsoore Oo Uu Hogaaminaayo Gudoomiyaha Maxkamada Sare Prof. Aadan Xaaji Cali Axmed Iyadoo Gudoomiyuhu Warbaahinta U Xaqiijiyey In Kiiskan ay u qaadi doonaa hab cadaalad ku dhisan oo lagu qanco. Fadhigan dhagaysiga Dacwada oo ahaa mid furan kana soo qaybgaleen dadweyne aad u tiro badan oo si wanaagsan ugu soo diyaar garoobay, wuxuu ku bilaabmay jawi dagan.
Dooda waxa ku hormaray labada Qareen Faysal Cali Waraabe matalayay , waxaanay gabi ahaanba deedafeeyeen jiritaanka Garabka Jamaal cali xuseen, iyagoo ku tiraabay inaanay Xisbigaba ahayn isla markaana dad aanay garanayn xisbigii ku haystaan, runtiina qareenada faysal wax sharciya kamay duuleen sababtoo ah waxay markiiba ku bilaabeen is fahamkii lawada galay wax jira maaha, manuu dhaqan galin sidaa awgeed Jamaal iyo garabkiisu wax xuquuqa ah xisbiga ucid kuma laha, gole dhexena kuma jiraan ilaa la qabto shirweyne aan caadi ahayn. Waxaanu faysal markii danbe ku calaacalay oo yidhi may ahayn inaan saxeexo heshiiska, waxa ii fiicnayd in 7 da qof ee Jamaal hogaaminayay magacyadooda u gudbiyo Guddida diiwaangalinta Ururada si ay ugu daraan liiska Golaha dhexe 21 kii kaydka u ahaa. Sidaas darted doodoodu waxay ahayd mid jaban oo aan xooganayn, wax daliil sharciya oo ay keeneena muu jirin oo way iska hor iyo daba imanaysay(contradiction).
Intaa kaib waxay doodu kusoo wareegtay Qareenada u doodayay Garabka Jamaal Cali Xuseen. Saddexda qareenba si aad iyo aad u heer saraysa ayay usoo diyaar garoobeen, waxaanay soo bandhigeen dood ku dhisan aqoon sharci oo hufan, waafaqsana Xeer 14, Distoorka Qaranka iyo Xeerka UCID. Ugu horayn Waxay qeexeen Heshiis waxa uu yahay “Heshiis Waa Sharciga Dhinacyada”. Sidaas darted Heshiiska badbaadada Ucid uu yahay mid loo maray dariiq sharci, mudada labada shirweyne Hay’adda ugu saraysa waa Golaha Dhexe oo awood loo siiyay Ansixintooda, bishii Oct. 28.2012 cod gacanta taag ah lagu doortay Musharaxa Madaxweynaha Xisbiga Ucid Jamaal cali xuseen sida ku cad Qodobka 26aad ee Xeerka Ucid iyo Qiraalka Faysal cali waraabe maxkamada horteeda ka qirtay inuu ka mid ahaa dadkii gacanta u taagay ee doortay Jamaal. Heshiiskan Isbahaysiga labada garab ee Xisbiga UCID, wuxuu suurogaliyey in xisbigu ka mid noqdo 3 xisbi qaran ee soo baxay, waxaana laga galiyay cudud Dhaqaale iyo mid codbixineed labadaba, iyadoo garabkan intooda badan ay soo xuleen Musharaxiintii Golayaasha deegaanka ee codkooda uu kusoo baxay xisbigu, Isbahaysigan wuxuu keenay in 41 Xildhibaan maanta ucid ku yeelato Dalka iyo Mayorada ugu badan, Maayor Berbera, Maayor Gabiley, Mayor Laascaanood, Mayor Xigeenka Caasimada. Heshiiskan ayay bulshadu codkooda ku siisay ucid mar labaad xisbi qaran ku noqday. Heshiiskii isbahaysiga waxa ka fulay hal qodob oo ah in uu Golaha dhexe fadhiistay oo ansixiyay heshiiskii is bahaysiga, doortayna musharaxa M/waynaha Xisbiga UCID, isla markaana waxa la buuxiyay xubnihii banaana ee hogaanka sare ee xisbiga, ee aan shirwaynaha lagu dooran ee kala ahaa Gudoomiye ku xigeenka 3aad, 4aad iyo Xoghayaha Guud, shirkaa Golaha dhexe ee UCID oo qabsoomay 28/10/2012, kaas oo go’aamadii ay gaadheen loo gudbiyay Hay’addahii ay khusaysay, nasiib daro Faysal wuxuu si toosa uga hor yimi qodobkii heshiiska ka fulay ee Golaha dhexena go’aanka ku soo saaray.
Qareenada Garabka Jamaal iyagoo si faahfaahsan oo sharciya qodob walba u dul istaagay, waxay iftiimiyeen in dhibaatada ucid haystaa tahay oo kaliya Faysal Cali Waraabe isagoo curyaamiyay dhamaan hay’adihii Xisbiga UCID ee ku xusnaa Dastuurka Xisbiga UCID iyo Xeer lr.14/11, iyadoo aanay jirin Shir la isugu yimi intii UCID Xisbi Qaran mar labaad noqday, iyadoo aanu jirin Gole dhexe oo shaqeeyaa, iyadoo aanay jirin Guddi fulin oo kulantaa, ma jiraan Golayaal Gobol, Degmo ama Tuulo ama laamo dibadeed oo shaqeeyaa ama dhisan, isagoo xubnihii hogaanka, xubnihii Golaha dhexe, Guddi fulinta iyo xubno kaleba, qaarkoodna ku qasbay in xisbiga ka tagaan, qaarna yidhi waan eryay, taas oo keentay in uu awoodii Xisbiga ku keliyaysto sida uu rabona ugu tagri falo. wuxuuna caadaystay maamul xumo, kelitalisnimo iyo musuqmaasaq, sababtoo ah. Wuxuu xilalkii ka qaaday ama magacaabay xubno hogaanka ah oo ay ahayd in shirwayne lagu doorto ama marka ay banaanaadaan Golaha dhexe buuxiyo sida waafaqsan Qod: 14(1),16(1) 26(1)(2) Iyo Xeer 14 Qodo 17(1) iyo 25(4). Faysal Cali Waraabe Wuxuu sababay in aan xisbigu miisaaniyad sanadeed yeelan, dhamaan hantida iyo dhaqaalaha Xisbiga uu si gaar ah ugu tagrifalo, hanti-dhawr aanu shaqayn, xisaab xidh aanu jirin, taas oo khilaafsan Qod:25, 30 iyo Xeer 14 23(1).
Gudoomiye Faysal wuxuu si cad uga sheegay warbaahinta hadalo ay ka mid yihiin “haddii ay musharixiinta Ucid noqdaan qaar aan u qalmin hogaanka wadanka in uu u sheegi doono dadweynaha in ay xisbiyada kale doortaan” isla markaana muujinaya in Gudoomiyaha UCID la shaqaynayo Xisbiyada kale ee ay UCID tartanka kula jirto. Faysal Wuxuu si joogto ah magaca Xisbiga UCID ku gaadhaa go’aamo uu keli ku yahay, oo aan cid xisbiga ka tirsan oo ku wehelisaa jirin, qaarkoodba aanu awood sharci u lahayn. Sidoo kale wuxuu maroorsaday oo ku tagrifalay awoodihii Shirwaynaha, Golaha, dhexe, Guddida Fulinta iyo Xoghayaha Golaha dhexe oo isaga ku sheegay in xoghayn uu u yahay oo isaga waraaqaha uqorta, taas oo khilaafsan Qod:32(4), 2aad,10aad,14aad,16aad.
Dood dheer oo socotay mudo 4 saacadood ah oo si dimuqraadiya loo dooday kadib waxay Maxkamada Sare su,aalo waydiiyeen qareenada labada dhinac iyo sidoo kale Jamaal Cali Xusen iyo Faysal Cali Waraabe. Su,aalahaas oo ku saabsanaa Heshiiska iyo dariiqa loo marayo shirweynaha aan caadiga ahayn. Dacwadan oo ahayd Racfaanka uu Faysal kasoo qaatay Go,aankii Gudida diiwaangalinta, dooda qareenadu oo ku wajahnayd nuxurka racfaanka, heshiisyadii labada garab iyo go,aanadii golaha dhexe. Qareenada Faysal waxay difaaci kari waayeen asbaabahii ay racfaanka ku soo qaateen kadib markii ay dood adagi kaga timid qareenada Garabka Jamaal oo Maxkamada horteeda kusoo bandhigay cadaymo waafaqsan sharciga, Xeer14 iyo Xeerka Ucid, dhinaca kalena ay ku adkaatay inay difaacaan kuna sii adkaystaan doodii jabnayd ee ay madasha keeneen. Wixii iigu layaabka badnaa mudadii ay doodu socotay waxay qareen ka mid ah Garabka Jamaal oo la yidhaa Maxamed Siciid oo miiska keenay dood hab farshaxanimo ah u dhigay ayaa Maxkmada ka codsaday in lala daawado Muuqaal Video ah oo cadayn u ah Heshiisyadii labada garab, Shirkii lagu doortay Jamaal, laguna ansixiyay Cali Guray oo waliba faysal gacanta taagayo, ayaa marqudha Faysal iyo Qareenadiisii cod dheer ku sheegeen in laga daayo Daawashada Video ga, iyagoo maxkamada u cadeeyay inay ogol yihiin Heshiiska iyo Musharaxnimada Jamaal, Waxaanu faysal cali waraabe afkiisa ka qirtay inuu ka mid ahaa dadkii gacanta u taagay Jamaal, muuqaalkana ay intaasi ku jirto, gunaanadkii dacwada dhagaysiga Maxkamada sare waxa kusoo ururaysaa dhawrkan qodob:
1. In labada dhinac ay isla ogolyihiin Heshiiska Isbahaysiga Labada Garab eek u taariikhaysan 12 June 2012, Faysal iyo qareenadiisuna waxay Maxkamada horteeda ka qirteen in Heshiiska ay galeen, Faysal gacantiisa ku saxeexay isagoo miyirkiisa qaba.
2. In qabsoomay Kalfadhigii 5aad ee Golaha Dhexe 28 Oct 2012. Shirkaasna cod gacantaag ah lagu doortay Musharax Madaxweynaha Jamaal Cali Xuseen, Faysal ka cadeeyey maxkmada horteeda. Laguna ansixiyay Gud. Xigeenka 3aad Cali Guray iyo Xoghayaha Guud Kayse oo garabka Jamaal ka yimid. Sidoo kale Qaban qaabada shirkaas lawada lahaa, dhaqaalahii ku baxay shirkaas dhamaan garabka Jamaal bixiyay.
3. In waxa dhiman uu yahay dhamaystirka shardiga labaad ee Heshiiska isbahaysiga labada garab, iyadoo Maxkamadu ay qareenada hortooda ka akhriday qodobka 4aad ee Heshiiska oo dhigaya In labad dhinac ay soo xulaan gudi qaban qaabo oo ka shaqaysa qabsoomida Shirweyne aan caadi ahayn si looga ansixiyo Heshiiska iyo Wax kabadal iyo kaabista lagu sameeyay Xeerka Ucid sida balaadhinta tirade Golaha Dhexe, Golaha fulinta iyo Buuxinta hogaanka sare ee xisbiga Ucid.
Marka aan kusoo dhowaado gunaanadka warbixintan waxaan si kooban u iftiimin doonaa go,aanka ay soo saari doonto Maxkamada Sare, horta wax badan kama duwanaanayo go,aankii ay hore u soo saareen Gudidada Diiwaangalinta Ururada iyo Asxaabta Qaranka, ee ahaa in siwada jira loo qabto Shirweynaha aan caadiga ahayn, iyadoo si siman loo qaybsanayo marka loo eego qodobka 4aad ee Heshiiska Isbahaysiga Labada Garab. Hadaba markaad eegto Sida ay Qareenada u doodayay garabka Jamaal Maxkamada Sare horteeda ay ka cadeeyeen inaanay shirweyne u baahnayn Musharaxnimada Jamaal sida ku cad Go,aanka golaha dhexe. Waxase la filayaa inay Maxkamada Sare kala qeexdo qodobada u baahan Shirweynaha iyo kuwa aan u baahnayn ee kusoo dhamaaday Shirkii Golaha Dhexe. Sababta oo ah heshiisku waxa uu u qaybsanaa laba qaybood, qayb u baahan shir gole dhexe iyo qayb u baahan shirweyne, Musharax nimada Jamaal waxa ay ahayd qaybta u baahan golaha dhexe kiina waa la horgeeyay waana la ansixiyay. Isku soo wada duuboo waxa halkaa ka dhacday dood qiimo badan, democracy ah oo si cadaalad loo dooday.
Hadaba dacwadan khilaafka Ucid ee ay gacanta ku hayso Maxkamadda Sare oo mudooyinkii u danbeeyay bulshadu somaliland ku amaanaysay inay dib usoo noolaysay Bahda garsoorka iyo Cadaalada kuna talaabsatay inay dadka ugu garnaqdo hab cadaalad ah. Go,aanka Maxkamada kasoo saarto khilaafka ucid oo mudo soo jiitamayay ayaa lagu qiimayn doonaa. Shacabka Somaliland ayaa si wayn ugu dhegtaagaya talaabada ay Maxkamada Sare kazoo saari doonto.
Qalinkii: Maxamed Adan Dubad “Gacayte”.